Biloowgii dib-u-heshiisiin dhab ah oo dhalata: Islaan Ciise, Farmaajo & Xalay-dhalaydii Garoowe – Radio Daljir
Biloowgii dib-u-heshiisiin dhab ah oo dhalata: Islaan Ciise, Farmaajo & Xalay-dhalaydii Garoowe
Janaayo 29, 2019 4:52 g 0
Hanuuniye: Cudurka aad wada qabtaan, qabkaad wada huwantihiin, qabiil weeye sideedee Soomaalaay qaran ku noqon!
Caleemasaarkii Soomaali ku baraarujiyey dib-u-heshiisiin iyo Soomaalinimo
Waanooyinka iyo talooyinku waxay la biloowdeen xafladdii caleemasaarka Madaxweyne Deni. Waxay ahaayeen waanooyin walaalnimo. Waxay ahaayeen waanooyiin waddaninimo. Waxay daarnaayeen mideynta siyaasiyiinta kalamaanka ah ee Soomaaliya, intooda “xilkaska” ah si loo helo Soomaaliya mideysan iyo Soomaali fayoow.
Badankood waanooyinku waxa ay ahaayeen kuwo ku wajahan Madaxweyne Farmaajo.
Haddaba waa run oo “Geelna waa galgashaa, ragna waa is gaddiyaa” laakiin siyaasi-doorka Soomaaliyeed maanta ma awoodaa in uu “is gaddiyo?”
Hoos kaga bogo falaanqeynta Radio Daljir.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 466 Wararka 18295
Farmaajo: “Waa inoo bisha Maarso iyo biloowgii dib-u-heshiisiin dhab ah oo dalka ka dhalata”